PressReader - Isolezwe: 2018-06-15 - Isithelekile kuleli iSuzuki Swift
Isithelekile kuleli iSuzuki Swift
IMOTO: SUZUKI SWIFT
ISITHELEKILE eNingizimu Afrika iSuzuki Swift obese kunesikhathi kubikezelwa ngayo ukuthi isendleleni.
Iza kuleli nje, isizakhele idumela phesheya kwezilwandle lapho inqobe khona izindondo nokubalwa kwezintathu eziphambilini emncintiswaneni we-Urban Car of the Year. ISwift entsha ngeyesizukulwane sesithathu kanti kubhekwe ukuthi iqhubeke nempumelelo yendala okudayiswe angaphezulu kwangu-19 000.
ISwift yaqala ukudayisa emhlabeni ngo-2005 ngaphambi kokuza kuleli ngo-2008. Eyesizukulwane sesibili yethulwa ngo-2011 njengoba sekufika lena esivele isitholakala emagaraji nje.
Isikhulu sezokumatha kwaSuzuki Auto South Africa, u-André Venter, sithe uma bebheka impumelelo yayo phesheya banethemba lokuthi izoqhubeka nokujabulisa amakhasimende nakuleli.
Le moto ithe ukuqumba kubhonethi phezulu. Iphinde ibe ne-grille entsha ngaphambili kanjalo nophawu lwayo olukhulu. Ngemuva ineLED stop lamp esiphezulu kwispoiler. Namalambu angemuva ngaweLED.
Ukuze kube lula ukuhlukanisa izinhlobo phakathi kweGL ne-GA, iGL ihluke ngamakhava emasondweni izibuko ezinombala wemoto ezinama-indicator kanjalo nama-fog lights ngaphambili. KwaSuzuki bathe banyuse i-wheelbase ngenxa yokuthi ithe ukuba yinde ngo-10mm imoto. I-wheelbase yona ikhumbuke ngo20mm.
Lokhu kwenze ukuthi isikhala sangaphakathi sabagibeli sithi ukuba xaxa. Nesempahla naso sindlondlobale ngo-58 litres okusenze safinyelela ku-268 litres.
Ngaphakathi i-centre console bayenze yabheka ngakumshayeli. Zonke zifika ne-air conditioner, amawindi kagesi, power steering ne-remote central locking. Ziyamtshela nomshayeli ngokuthi zidla kanjani uphethroli nokuthi szingahamba ibanga elingakanani ngosele.
I-GL fakwe neSuzuki audio system eneBluetooth connectivity futhi idaka ne-USB, amabhathini esiteringini okulawula umsakazo kanjalo nezibuko zasemaceleni ezisethwa ngogesi.
ISwift entsha ihamba ngenjini eyejwayelekile iK12M. Iyifour-cylinder kanti inamandla angu-61 kW ne-torque engu-112 Nm. Ngebanga lika-100km bathi isebenzisa amalitha angu-4.9 kanti ingakwazi ukuhamba ibanga elingaphezulu kuka-750 km kwazise inethangi lika37 litres. Ine-5 speed gearbox eshintshwayo kodwa kwiGL bengakwazi ukukhetha ne-Automated Manual Gearbox nayo enamagiya ayisihlanu. Kwezokuphepha ifika namaairbags mshayeli nomgibeli ngaphambili, ABS brakes ne-Electronic brake-force distribution nendawo yokufaka isihlalo sengane. AMANANI SWIFT 1.2i GA MT 1.2i GL MT 1.2i GL AMT 159,900 175,900 189,900 I-1.2i GL MT yethulwa ibiza uR169 900.
Inani lihlanganisa i warranty yesipesheli yeminyaka emihlanu noma u-200 000km ne service plan yeminyaka emibili noma u-30 000km.